Manaiky fanaingoana ve ianao？
Mazava ho azy, afaka manaiky ny fanaingoana isika. Izahay dia matihanina R&D, famokarana sy fivarotana orinasa. Hamboarinay ny vokatra arak'izay takinao.
2 ， Ny vokatrao dia manana kaontim-bola fatra farafahakeliny farafaharatsiny, fa inona no ataoko raha te hividy santionany kely fotsiny aho? Toy ny tapa-1-2?
Raha ny mahazatra dia hampandoavinay vola ny saran-dàlana sy ny fandefasana entana, fa aza matahotra, raha mametraka baiko ofisialy aminay ianao avy eo, dia hesorinay ny sarany santionany amin'ny baiko
fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, thermometer nomerika Aquarium, thermometer nomerika, fanaraha-maso ny mari-pana incubator, nomerika nomerika mpanara-maso, fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny hafanana,